SMS anaghị anwụ anwụ. Nụrụ Mgbe Geo-fencing? | Martech Zone
Wednesday, September 1, 2010 Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Douglas Karr
Ọrụ Izi ozi dị mkpụmkpụ (SMS) nwere ike iyi obere ngafe na mwakpo nke smart igwe na ngwa mkpanaaka… mana ọ nwụrụ anwụ.
SMS, ma ọ bụ “Short Short Service,” bụ ihe akacha eji data data na ụwa, yana 2.4 ijeri ọrụ ndị ọrụ, ma ọ bụ 74% nke ndị niile debanyere aha na ekwentị mkpanaaka… SMS na-eme nke ọma n'ụzọ zuru ezu kwupụta mobile ahịa ngwa nyere ya ukwuu onwe agwa, fọrọ nke nta 100% emeghe ọnụego, ikike maka ọdịnaya ezubere iche dabere na ọtụtụ metrics na njirimara dị na ya maka ụzọ nkwukọrịta abụọ na ndị ahịa.
Akwụkwọ dị egwu, Akuko Azụmaahịa MobileStorm 2010 Mid Year dị nke nwere ọtụtụ ozi na ahịa ekwentị - gụnyere nyiwe, ngwa, itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta, ecommerce na ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Otu n'ime mkparịta ụka dị n'akwụkwọ akụkọ a bụ Ọrụ Ndị Dabere na Ọnọdụ (LBS) & Mgbasa Ozi (LBA). Ntuli aka na nso nso a na-egosi na ndị na-azụ ahịa dị nnọọ oghe na mgbasa ozi dabere na ọnọdụ. Ebe Facebook na akuku anọ ra nrata na-aghọ ngwa a ma ama maka azụmaahịa iji jikọọ na ndị ahịa… mana ọganiihu na teknụzụ SMS akpọrọ 'geo-fencing' nwere ike bụrụ oke ewu ewu!
Site na iwebata na nnweta data data onye ọrụ, a na-ejiwanye ya iji bulie mkpọsa SMS n'ihe gbasara mkpa. Echiche a maara dị ka "geo-fencing" gụnyere ịtọ mpaghara dijitalụ gburugburu ebe enyere, dị ka ụlọ ahịa na-ere ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, wee nwee ike izipu ozi SMS na ndị ọrụ na-abanye na mpaghara ahụ. Opted-na ndị debanyere aha a deli si mobile omume nwere ike na-akpaghị aka na-enweta a oge-enwe mmetụta dere dere n'oge ọ bụla ha na-abịa n'ime a mile nke ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ọmụmaatụ, na-enye ntabi uru ka onye ọrụ na-akwọ ụgbọala ozugbo ahịa maka deli.
Nsogbu ahịa dikwa na mmiri. Marketingre ahịa nso ga-ekwe ka azụmaahịa ndị nwere Bluetooth ma ọ bụ SMS-CB (Ọrụ Nkụzi Dị mkpirikpi - Mgbasa Ozi Cell) ga-enye ndị azụmaahịa ohere 'ịkwanye' mgbasa ozi mgbe onye na-azụ ahịa rutere nso mpaghara mpaghara nnyefe. Ebe ọ bụ na teknụzụ a anaghị achọkarị ikike, ọ bụ idi nso ma ahia idi nso di nma ma obu na ogaghi adi ewu ewu.
Tags: geo-fencinggeofencinggeotargetingobere ozi usoroSMS
Sep 1, 2010 na 3:16 PM
O bu akwukwo edeputara n’agha, Jenn! Daalụ ndị otu gị - chaị!
Sep 1, 2010 na 3:21 PM
Mgbasa ozi nye ndị ọrụ n'ime geo-nsu dịkwa egwu. "1/2 price ihe ọ drinksụ drinksụ ọma ruo 9pm !!"